झम्के रातमा काली तीरैतीर | संस्मरण | इन्द्रध्वज क्षेत्री | दशैं साहित्य विशेष
मलाई अगाडि बढ्नुको विकल्प थिएन । तर, डरको पारो भने चढ्दैछ । यही बेला बीरबल पनि गायब भए । एक्लै मशानघाट पार गर्नु छ । केही आइलाग्यो भने आत्मसमर्पण गर्ने सोचसहित सास दबाएर पाइला चालें । शनै शनै शवदाहस्थल पनि कटेछ ।
२०५७ को चैतको अन्त्यतिर । आईए दोस्रो वर्षको पढाइ सकियो, जाँचको ठेगान छैन । त्यसैले घर जाने टुंगो भयो। साँझ आठ बजेतिर नारायणगढबाट बेनी जाने गाडी चढेको बिहान साढे २ बजे नै कुश्मामा लगेर झारिदियो । कुश्मामा पुगेपछि यात्रुहरूले चियासिया खान्थे, ड्राइभर खलाँसी एक झम्को निद्रा बिसाउँथे ।सुनौली, वीरगंज, गौर र काठमाडौंबाट पनि आएका गाडी जम्मा भएपछि आ–आफूले अर्को गन्तव्यका लागि ल्याएका यात्रु साटफेर गरेर बिहान ५ बजेतिर बल्ल बाग्लुङ वा बेनीतिरको बाटो तताउँथे ।
केही यात्रु कुश्मामै झरेर मोदी खोला तरेर ज्ञादी, फलेवासतिर वा म झैं कालीगण्डकी तरेर बलेवा, कुश्मीसेरातिर लाग्ने पनि थिए । तर कोही यात्रु हिंड्ने सुरसार गरेनन् । बिहानीपखको जाडोमा ह्वारह्वारी बलिरहेका अँगेनोको वरिपरि जम्मा भए र त्यहीं चिया खान थाले । शायद झमक्क रात निकालेर बिहानीपख हिंड्ने सुरसारमा थिए ।
बुवाले पठाएको पैसा रित्याएर घर फर्केको म, चियामा पैसा खर्च गर्न मन लागेन, चिया नखाएपछि अँगेनो नजिक जान पनि धक लाग्यो । पूर्णिमाको केही दिनपछिको रात थियो शायद, आकाशमा जून टहटह थिए ।अनि निर्णय गरें, बाटो लाग्छु, उज्यालो हुँदै जाला।
शिवालय, बड्गाउँचोक हुँदै ढिक पुगें । त्यहाँसम्म त जूनको उज्यालोमा सडक बत्ती वा घरको बाहिर बालिएका बत्तीहरूले पनि झलमल्ल बनाएका थिए । नेपथ्यमा अनवरत बजिरहेका खच्चडका घण्टीहरूले आवाज दिंदै थिए ।
ढिकबाट ओरालो लाग्दा फेरो परेपछि अब तिनै खच्चडका घण्टी पनि सुनिन छोडे ।उज्यालोको लागि पनि अब जूनको मात्रै साथ बाँकी रह्यो । एक मन लाग्यो फर्केर कुश्मा नै जान्छु र उज्यालो भएपछि हिंड्छु । तर आधा घण्टाजति हिंडिसकेको थिएँ । फर्कन मन लागेन। सम्झें तल कालीगण्डकीको पुलमा वारिपारि नै मानिस बस्छन् । उठिसकेका होलान्, त्यहीं गएर रात निस्केपछि हिंड्छु ।
ढिकबाट ओर्लंदा पातलो सल्लाको जंगल हुँदै झर्नुपथ्र्यो, ठाउँठाउँमा छायाँ पर्दा खाडलमा जाकिइन्छ कि जस्तो हुन्थ्यो तर तीरमा पुगेर चिया खाने अनि उज्यालो भएपछि हिंड्ने आशामा ओरालो झरी नै रहें । रात्रिकालीन स्तब्धतामा कलकल बगिरहेको कालीगण्डकीको तीरमा पुग्दा भने म विस्मित भएँ, किनकि त्यहाँ त शून्यता छ । जीवित प्राणीको कुनै गन्ध छैन ।
आशा–शायद यही चीजले मानिसले अति कठिन र खतरनाक परिस्थितिमा पनि आफूलाई पार लगाउँछ । मलाई आशावादी बन्न सिकाउने व्यक्ति भने अरु कोही नभई बीरबल हुन् । अनगिन्ती कथामा उनले शक्तिशाली बादशाह अकबरलाई बुद्धिमत्तापूर्वक हराएका छन् ।
एक कथामा बीरबलले अकबरसित बाजी परेपछि अनकण्टार ठाउँमा दूर क्षितिजमा देखिएकोएउटा बत्तीको सहारामा एक्लै रात बिताएका थिए ।म आज आफैं बीरबल झैं अनकन्टार निर्जन ठाउँमा गहिरो रातमा एक्लै पाइला चालिरहेको छु ।
कुश्मामा छउन्जेल खच्चडको घण्टीको भर लागेको थियो । त्यसपछि तीरमा मान्छे होलान् भन्ने आशमा ओर्लिरहें । अबलाग्यो नदी पारि त पुलको मुखैमा चियापसल छ । त्यहाँ त पक्का मान्छे छन् ।अनि कालीगण्डकीमाथि लमतन्न सुतिरहेको फलामे पुलतर्फ पाइला चालें ।
पुल तरें ।दुर्भाग्य, यहाँ झन् ठूलो निस्तब्धता छ । अब त जून पनि कैयाको पाखाबाट पश्चिमतिर डुब्ने तरखरमा छ । म भने आधा बाटो पुगेको छु । न फर्किन सक्छु, न अगाडि बढ्न नै । जून अस्ताएपछि झमक्क अँध्यारो हुनेछ, यो अँध्यारोमा म कालीको तीरमा भूत–पिशाच र मसानको शिकार बन्नेछु ।अनि बाँचिहाले बिहानीपख सक्रिय हुने जंगली जनावरको । मलाई यही भयले सताउन थाल्यो ।
तर, साथ छ उनै बीरबलको। मेरी हजुरआमा र आमाले मलाई सयौंपटक बीरबलको कथा सुनाउनुभयो । शायद भविष्यमा यस्तै बेला चाहिनेछ भन्ठानेरै होला ।
कदम कदममा डर र अनिश्चय छ तर बीरबल अर्थात् आशाको झिल्को पनि छ । पुलको ५०० मीटर तलतिर आँपको बगैंचाबीच एउटा परित्यक्त र खण्डहर सत्तल छ । यसअघि त्यो बाटो हिंड्दा त्यहाँ पनि खच्चडको दिसाको गन्ध आउँथ्यो । लाग्यो कतै आज खच्चडेहरू त्यहीं बास बसेका छन् र मानिसको गन्ध छ त्यहाँसम्म । खण्डहर त आई नै हाल्यो। तर, खै त मानिस? खै खच्चडको दुर्गन्ध? खच्चडको दिसा र पिसाबको दुर्गन्धसमेत प्रिय हुनसक्छ भन्ने पहिलोपटक यहीं अनुभव गरें ।
मानवको गन्ध पाउने अन्तिम स्थान यही थियो । वारि काली तीरमा र पारिपट्टि मोदीको तीरमा मशानघाट छन् ।पारि मशानघाटको माथिपट्टि पनि एउटा जीर्ण सत्तल छ र अलिक पर पुलको मुखमा केही छाप्रे चियापसल छन् । यिनै घर, काली र मोदीसित खेल्ने बोटेहरूको कथामा महेश्वर पन्तले फुर्लुङ उपन्यास लेखेका हुन् । वारिपट्टि कालीतीरको मशानघाटमा बलेवातिरकाले शवदाह गर्छन् । अब कालीगण्डकीको तीरैतीर करीब आधा घण्टाको ख्वाङ आउँछ र यिनै मशानघाटको बाटो भएर यो ख्वाङ पार गर्नुपर्नेछ ।
जनश्रुतिमा भूतप्रेत र पिशाचले मानिसलाई गलहत्याएर सडकबाट नदीमा चोबलेको, शिरदेखि पाउसम्म सफेद कपडा लगाएका उल्टो पाइला भएकाकिचकन्नीहरूले नृत्य देखाएर यौनसम्पर्कका लागि सम्मोहित गरेको र त्यसपछि मुटु झिकेर खाएको, राम्रोसँग क्रियाकर्म नगर्नाले भड्किरहेका आत्माहरू राति आफ्नो शवदाह गरिएको ठाउँमा बत्ती बालेर बैठक गरिरहेको कथाहरू सुन्दै हुर्केबढेको थिएँ । भौतिक बाघभालुसित भन्दा मशान र भूतपिशाचसँग बढी डर लाग्थ्यो ।
मलाई अगाडि बढ्नुको विकल्प थिएन ।तर, डरको पारो भने चढ्दैछ । यही बेला बीरबल पनि गायब भए । एक्लै मशानघाट पार गर्नु छ । केही आइलाग्यो भने आत्मसमर्पण गर्ने सोचसहित सास दबाएर पाइला चालें । शनै शनै शवदाहस्थल पनि कटेछ ।
समस्या भने टरेको छैन ।
हेर्दाहेर्दै जून पनि अस्ताइसके र बिहानीपखको झम्के अँध्यारो शुरू भयो ।अब बाटो झन् अप्ठ्यारो छ । मध्य बर्खामा कालीगण्डकीले यहाँको बाटोसमेत डुबाउँछ तर अहिले भने करीब २० मिटर तल बायाँतर्फबाटै गड्गडाउँदै फाल हालिइरहेछ । दायाँतर्फको पहरामा त्यो आवाज प्रतिध्वनित भएर झन् ठूलो भएको छ । दिउँसै यो बाटो हिँड्दासमेत यो प्रतिध्वनिले माथि कैयाको भीर नै खस्लाजस्तो भयावह अनुभूति गराउँछ ।
यहाँ भने बीरबल पुनः टुपुल्किए । अप्ठ्यारो बाटो टुंगिने बेलामा एउटा यामानको ढुंगाले सुरक्षा गरेर बचाएको एक चोक्टा बगर छ जहाँ कहिलेकाहीं नौकाबिहार गर्दै आएको पर्यटकसहितको टोली पाल टाँगेर बसिरहेको हुन्छ । आज पनि त्यहाँ पहेंलो र सेतो पाल टाँगेर नौकाबिहारीहरू बास पो बसेका छन् कि ? तर बीरबल यहाँ पनि फेल भए, निक्लँदो हिउँदमा र्‍याफ्टिङको मौसम शुरु नै भएको थिएन, कुनै मानवीय गन्ध थिएन ।
यो ढुङ्गा कटेपछि काली अलिक तलतिर पुग्छ र बाटो अर्को घना झ्याङको बीचबाट जान्छ जहाँ बाघले गाईवस्तुलाई हानेका कथा सुनिन्थे ।भूतपिशाचबाट बचेको म अब बाघ वा भालुको मुखतिर जाँदैछु ।
बीरबल भन्छ– अलिक पर्तिर टहरो बनाएर एकजना बाजेले बटुवालाई खीर खुवाउँछन् । गाई पनि त्यहीं बाँध्छन् । त्यति नजिकमान्छे बस्ने ठाउँमा बाघभालु बस्दैन । निडर भई जानु ।
उनको उपदेश शिरोधार्य गर्दै अगाडि बढिरहें । तर अफशोच, यहाँ कुनै मानवीय वा गाईवस्तुको पनि गन्ध थिएन ।
जून पूरै भूमिगत भइसकेका छन् । ताराको उज्यालोमा टल्किरहेका ढुङ्गा पछ्याउँदै पाइला चाल्दैछु । अगाडि आउँछ धापे खोला र त्यसपछि सरङ्गीको नाके भीर । पानी पर्दा उर्लेर कालीगण्डकी भेट्टाउन फाल हाल्ने यो खहरे खोलाले थुप्रैलाई यसअघि आफूमा समाहित गरिसकेको छ ।
२०५० सालतिर कुश्मासम्म गाडी पुग्ने भएपछि त्यहाँबाट चारैतिर घोडेटो बाटो बन्ने क्रममा ७/८ वर्षअघिमात्रै कुश्मा-कुश्मी सेरा जोड्ने यो बाटो डोरेटोबाट घोडेटोमा स्तरोन्नति भएको थियो । यो बाटो बन्ने बेलामा धापे खोलाबाट शरंगी उक्लने नाके भीर डाँकाहरूको अड्डा बनेको थियो । गोरखपुर र सुनौलीबाट समेत झिटीगुन्टा बचाएर ल्याएका लाहुरेहरू यही भीरमा लुटिएका थिए । यी सबै सम्झनाहरू तँछाडमछाड गर्दै आइरहेका छन् ।
मिर्मिरे उज्यालोमा शरंगीको ढिकमा पुगें । बल्ल देख्दैछु एकजना मानिस डोको बोकेर मतिर आउँदैछन् ।मलाई एक्लै चौतारीमा बिसाइरहेको देखेर उनी पो झसंग भए । म मान्छे नै भएको निश्चित भएपछि सोधखोज गर्न थाले । म कुश्माबाट एक्लै हिंडेर त्यति बिहानै आइपुगेको भनेपछि बुढाले कम्तीमा एक मिनेट आँ गरे । भने, भाग्यमानी रहेछौ, बाँचेर आयौ । यो बाटोमा त चितुवा लाग्छ, मशान नाच्छ, कतिपटक म नै बाँचेर हिंडेको छु ।
जे होस् म बाँचें ।
त्यसपछि पनि राति निर्जन ठाउँ या जंगलमा केहीपटक हिंडेको छु तर एक्लै रातिमा यति लामो समय पैदलयात्रा गरेको भने यो नै पहिलो र हालसम्मको अन्तिम हो । २०५५ मा क्याम्पस पढ्न चितवन झरेदेखि २०६६ मा बसाइँ नझरुन्जेलका ११ वर्षमा यो र पारि फलेवास हुँदै मोदीबेनी तरेर कुश्मा आवतजावत गर्ने बाटोमा पचासौंपटक ओहोरदोहोर गरें हुँला, यो जत्तिको भयपूर्ण र दुस्साहसपूर्ण यात्रा अर्को थिएन ।
र, यो संस्मरण झण्डै दुई दशकपछि लेख्न किन जरूरी ठानें भने अब यी अनुभव इतिहास बन्दैछन् किनकि अहिले कोही मानिस पनि त्यो बाटो हिंड्दैनन् । सबैभन्दा पहिले कुश्माबाट अर्जुनचौपारी जाने पुल बनेर नेपालको सबैभन्दा अग्लो झोलुङ्गे पुलको इतिहास लेखियो, यता मोदी झरेर अर्जुनचौपारी वा मुडिकुवा हुँदै फलेवास निस्कने बाटो इतिहास बन्यो । त्यसपछि कुश्माबाट बलेवा विमानस्थल जोड्ने गरी अर्को डब्बावाला पुल बन्यो र लगत्तै बन्यो कुश्माबाट कैया जोड्ने गरी अर्को झोलुङ्गे पुल । कालीगण्डकीमाथि बनेको यो पुलले मोदीमाथि बनेको ‘सबैभन्दा अग्लो झोलुङ्गे पुल’को इतिहास खोस्यो र म र मजस्तै हजारौंले दुःख पाएको कालीको तीरमा निस्केर शरंगी वा कैया निस्कने बाटो, दुःख र पीडा इतिहास बन्यो ।
अहिले त कुश्माबाट फलेबास र कैयाबाट फलेबास जोड्ने थप दुई पुल पनि बनिसकेका छन् । केही किलोमिटर माथि बाग्लुङ बजारबाट पाङ जोड्ने अर्को झोलुङ्गे पुलसमेत बनेको छ र यसले फेरि कुश्मा- कैया जोड्ने पुल बनेर संसारकै सबैभन्दा अग्लो झोलुङ्गे पुलको इतिहास खोसेको छ ।
केही वर्षअघिसम्म असम्भव देखिने झोलुङ्गे पुलका लर्कोहरूलेकाली र मोदीतीरका घोडेटो बाटोहरू, यहाँका अनगिन्ती कथा, दुःख र पीडा भने बिरानो बनाएका छन् । लाग्छ, अहिले त्यहाँ बाघ भालु, मशान र भूत पिशाचको निस्फिक्री एकछत्र राज चल्छ ।